ကလေးမွေးပြီးနောက် ဂျိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ နည်းလမ်း - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty ကလေးမွေးပြီးနောက် ဂျိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ နည်းလမ်း
ကလေးမွေးပြီးနောက် ဂျိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ အမည်းစက်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ နည်းလမ်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ ဂျိုင်းကြားက အရေပြားမဲသွားတာ၊ မှဲ့ခြောက်နှင့် တင်းတိတ်တွေ ဖြစ်လာတာဟာ အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအများစု တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါက ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပေမယ့် မြန်မြန်ပျောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဖြေရှင်းနည်းလေးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သင့်ဂျိုင်းကြားမှာ ဘာကြောင့် အမည်းစက်တွေ ပေါ်လာရတာလဲ?
တစ်ချို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂျိုင်းကြားက အခြားသူတွေနဲ့မတူပဲ မည်းနေတတ်ပါတယ်။ ပေါင်ခြံနှင့် နို့သီးခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာလည်း အလားတူပါပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် ဖြစ်သော ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲကြောင့် ရောင်ခြယ်များလာခြင်းဖြစ် ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်မှာ အများအားဖြင့် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမည်းစက်တွေဟာ အသားဖြူတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက် အသားညိုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုပြီးအဖြစ်များပါတယ်။ အသားဖြူတဲ့သူတွေမှာ ပုံမှန်အသားရောင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပေမယ့် အသားညိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ မူလရောင်ခြယ်က recover ပြန်မလုပ်နိုင်တာကြောင့် ကျန်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဂျိုင်းကြားထဲက အမည်းစက်တွေကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားနိုင်သလဲ?
ရေများများသောက်ခြင်းသည် သင့်ကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေစေပြီး သင့်အရေပြားကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။
moisturizing creams သို့မဟုတ် lotions အသုံးပြုပါ။ နေရောင်ထဲထွက်တဲ့အခါ နေရောင်ကာကွယ်ဆေးလိမ်းဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ဒါ့အပြင် အယ်ကိုဟော ပါဝင်တဲ့ roll-on တွေ၊ deodorants တွေရှောင်ကြဉ်ပါ။ အမည်းစက်တွေကို ပျောက်စေပြီး အသားအရေကို ရေဓါတ်ပေးတဲ့ deodorants တစ်ချို့ရှိတာကြောင့် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ရှေးကလူကြီးတွေရဲ့ ဒီအကြံပြုချက်က သိပ္ပံနည်းကျ သက်သေအထောက်အထားမရှိပေမယ့် ထိရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့မွေးကင်းစကလေးဆီးသွားတဲ့အခါ ဝါဂွမ်းစဖြင့် ဆီးကိုယူပြီး သင့်အရေပြားပေါ်မှာ ပွတ်ပေးပါ။ ခြောက်သွားအောင် ထားဖို့လိုပါတယ်။
မိခင်နို့ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးထဲက တစ်ခုကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း မဲသွားတဲ့ သင့်ဂျိုင်းကြားအသားအရေကို ပြန်လည်ဖြူစေဖို့ ကူညီပေးတာပါ။ နို့နည်းနည်းကို သင့်ဂျိုင်းကြားထဲက အမည်းစက်တွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပြီးခြောက်သွေ့အောင်ထားပါ။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်တည်းက ရှိနေတဲ့ အမည်းစက်တွေကိုလည်း ဒီနည်းအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အုတ်ဂျုံ ထမင်းစားဇွန်း ၂ဇွန်းကို ပျားရည် တစ်ဇွန်း၊ သံပုရာသီးတစ်လုံးရဲ့အရည်ဖြင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ရောပါ။ သင့်ဂျိုင်းကြားကို လိမ်းပေးပြီး ၁၅မိနစ်လောက်ထားပါ။ ပြီးမှရေနွေးနွေးနဲ့ဆေးပေးပါ။
ဂရစ်စလင်း ၁၀စက်၊ သံပုရာရည် ၁၀စက်နှင့် ဗာဒံဆီ သို့သံလွင်ဆီ ၁၀စက်ကို ဘူးအလွတ်တစ်ခုထဲမှာ ထည့်မွှေပါ။ရေမချိုးခင် အမည်းစက်တွေကို လိမ်းပေးပြီး မိနစ်အနည်းငယ်လောက်နေမှ ရေချိုးပေးပါ။
ဒီနည်းလမ်းဖြင့် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် ညင်သာစွာ exfoliation လုပ်ပေးပါ။သဘာဝဒိန်ချဉ် တစ်ဇွန်းကို အုတ်ဂျုံ တစ်ဇွန်းဖြင့် ရောပါ။ သင့်ချိုင်းကြားမှာ လိမ်းပေးပြီး ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ၅မိနစ်လောက်နေမှ ရေနွေးနွေးဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ။ ပြီးနောက် moisturizing cream တစ်ခုခုလိမ်းပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
အုးန်ဆီကို အုတ်ဂျုံနှင့် ခပ်ပျစ်ပျစ်ရောပါ။သင့်ဂျိုင်းကြားမှာ လိမ်းပေးပြီး ၁၅မိနစ်လောက်နေမှ ရေဖြင့်ဆေးကြောပေးပါ။
၇။ Chemical peeling
ဒီcosmetic ကုသမှုက အရေပြားရဲ့မည်းနေတဲ့အလွှာကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒါက ကလေးကို နို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တွေ အတွက်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါက သွားဖြူစေဖို့နှင့် ကျန်းမာရေး၊ အလှအပအတွက်ကောင်းစေမယ့် ဂျိုင်းကြားအသားအရေက နူးညံ့တဲ့အတွက် ပွန်းပဲ့ခြင်းမဖြစ်စေအောင် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို အသုံးပြုခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဖြူဝင်းစေမယ့်အစား သင့်ချိုင်းကြားထဲက အမည်းကွက်တွေကို ပိုဆိုးလာစေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဂျိုင်းကြားက အမည်းစက်တွေက ယားယံတာ ၊ ကျိန်းစက်တာတို့ဖြစ်လျှင် အရေပြားဆရာဝန်နှင့် ပြသဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
ကလေးမှေးပွီးနောကျ ဂြိုငျးကွားမှာရှိတဲ့ အမညျးစကျတှကေို ဖယျရှားပဈဖို့ နညျးလမျး
ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျးမှာ ဂြိုငျးကွားက အရပွေားမဲသှားတာ၊ မှဲ့ခွောကျနှငျ့ တငျးတိတျတှေ ဖွဈလာတာဟာ အမြားအားဖွငျ့ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီအဖွဈအပကျြကို ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးအမြားစု တှကွေုံ့ရတတျပါတယျ။ ဒါက ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှနေဲ့ ဆကျစပျနတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ ကလေးမှေးဖှားပွီးနောကျ ပြောကျကှယျသှားလရှေိ့ပမေယျ့ မွနျမွနျပြောကျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ဖွရှေငျးနညျးလေးတှကေို မြှဝလေိုကျပါတယျ။
သငျ့ဂြိုငျးကွားမှာ ဘာကွောငျ့ အမညျးစကျတှေ ပျေါလာရတာလဲ?
တဈခြို့ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှရေဲ့ဂြိုငျးကွားက အခွားသူတှနေဲ့မတူပဲ မညျးနတေတျပါတယျ။ ပေါငျခွံနှငျ့ နို့သီးခေါငျးတဈဝိုကျမှာလညျး အလားတူပါပဲ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျတှငျ ဖွဈသော ဟျောမုနျး အပွောငျးအလဲကွောငျ့ ရောငျခွယျမြားလာခွငျးဖွဈ ကလေးမှေးဖှားပွီးနောကျမှာ အမြားအားဖွငျ့ ပြောကျကှယျသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီအမညျးစကျတှဟော အသားဖွူတဲ့ အမြိုးသမီးတှထေကျ အသားညိုတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှော ပိုပွီးအဖွဈမြားပါတယျ။ အသားဖွူတဲ့သူတှမှော ပုံမှနျအသားရောငျအတိုငျးပွနျဖွဈသှားပမေယျ့ အသားညိုတဲ့အမြိုးသမီးတှမှောတော့ မူလရောငျခွယျက recover ပွနျမလုပျနိုငျတာကွောငျ့ ကနျြခဲ့နိုငျပါတယျ။
ဂြိုငျးကွားထဲက အမညျးစကျတှကေို ဘယျလိုဖယျရှားနိုငျသလဲ?
ရမြေားမြားသောကျခွငျးသညျ သငျ့ကို ရဓောတျပွညျ့ဝနစေပွေီး သငျ့အရပွေားကို အစိုဓာတျဖွညျ့ပေးလိမျ့မညျ။
moisturizing creams သို့မဟုတျ lotions အသုံးပွုပါ။ နရေောငျထဲထှကျတဲ့အခါ နရေောငျကာကှယျဆေးလိမျးဖို့ မမပေ့ါနဲ့။
ဒါ့အပွငျ အယျကိုဟော ပါဝငျတဲ့ roll-on တှေ၊ deodorants တှရှေောငျကွဉျပါ။ အမညျးစကျတှကေို ပြောကျစပွေီး အသားအရကေို ရဓေါတျပေးတဲ့ deodorants တဈခြို့ရှိတာကွောငျ့ သငျရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။
ရှေးကလူကွီးတှရေဲ့ ဒီအကွံပွုခကျြက သိပ်ပံနညျးကြ သကျသအေထောကျအထားမရှိပမေယျ့ ထိရောကျတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သငျ့ရဲ့မှေးကငျးစကလေးဆီးသှားတဲ့အခါ ဝါဂှမျးစဖွငျ့ ဆီးကိုယူပွီး သငျ့အရပွေားပျေါမှာ ပှတျပေးပါ။ ခွောကျသှားအောငျ ထားဖို့လိုပါတယျ။
မိခငျနို့ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးအမြားကွီးထဲက တဈခုကတော့ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျအတှငျး မဲသှားတဲ့ သငျ့ဂြိုငျးကွားအသားအရကေို ပွနျလညျဖွူစဖေို့ ကူညီပေးတာပါ။ နို့နညျးနညျးကို သငျ့ဂြိုငျးကွားထဲက အမညျးစကျတှပေျေါမှာ လိမျးပေးပွီးခွောကျသှအေ့ောငျထားပါ။ ကိုယျဝနျမဆောငျခငျတညျးက ရှိနတေဲ့ အမညျးစကျတှကေိုလညျး ဒီနညျးအတိုငျး ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
အုတျဂြုံ ထမငျးစားဇှနျး ၂ဇှနျးကို ပြားရညျ တဈဇှနျး၊ သံပုရာသီးတဈလုံးရဲ့အရညျဖွငျ့ ခပျပဈြပဈြရောပါ။ သငျ့ဂြိုငျးကွားကို လိမျးပေးပွီး ၁၅မိနဈလောကျထားပါ။ ပွီးမှရနှေေးနှေးနဲ့ဆေးပေးပါ။
ဂရဈစလငျး ၁ဝစကျ၊ သံပုရာရညျ ၁ဝစကျနှငျ့ ဗာဒံဆီ သို့သံလှငျဆီ ၁ဝစကျကို ဘူးအလှတျတဈခုထဲမှာ ထညျ့မှပေါ။ရမေခြိုးခငျ အမညျးစကျတှကေို လိမျးပေးပွီး မိနဈအနညျးငယျလောကျနမှေ ရခြေိုးပေးပါ။
ဒီနညျးလမျးဖွငျ့ တဈပတျကို တဈကွိမျလောကျ ညငျသာစှာ exfoliation လုပျပေးပါ။သဘာဝဒိနျခဉျြ တဈဇှနျးကို အုတျဂြုံ တဈဇှနျးဖွငျ့ ရောပါ။ သငျ့ခြိုငျးကွားမှာ လိမျးပေးပွီး ညငျသာစှာ နှိပျနယျပေးပါ။ ၅မိနဈလောကျနမှေ ရနှေေးနှေးဖွငျ့ ဆေးကွောပေးပါ။ ပွီးနောကျ moisturizing cream တဈခုခုလိမျးပေးတာက အကောငျးဆုံးပါ။
အုးနျဆီကို အုတျဂြုံနှငျ့ ခပျပဈြပဈြရောပါ။သငျ့ဂြိုငျးကွားမှာ လိမျးပေးပွီး ၁၅မိနဈလောကျနမှေ ရဖွေငျ့ဆေးကွောပေးပါ။
ဒီcosmetic ကုသမှုက အရပွေားရဲ့မညျးနတေဲ့အလှာကို ဖယျရှားပေးပါတယျ။ ဒါက ကလေးကို နို့တိုကျနတေဲ့ မိခငျတှေ အတှကျတော့ အဆငျမပွပေါဘူး။
မုနျ့ဖုတျဆိုဒါက သှားဖွူစဖေို့နှငျ့ ကနျြးမာရေး၊ အလှအပအတှကျကောငျးစမေယျ့ ဂြိုငျးကွားအသားအရကေ နူးညံ့တဲ့အတှကျ ပှနျးပဲ့ခွငျးမဖွဈစအေောငျ မုနျ့ဖုတျဆိုဒါကို အသုံးပွုခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။ ဖွူဝငျးစမေယျ့အစား သငျ့ခြိုငျးကွားထဲက အမညျးကှကျတှကေို ပိုဆိုးလာစပေါလိမျ့မယျ။ သငျ့ဂြိုငျးကွားက အမညျးစကျတှကေ ယားယံတာ ၊ ကြိနျးစကျတာတို့ဖွဈလြှငျ အရပွေားဆရာဝနျနှငျ့ ပွသဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
Previous articleပုံတုံးတုံး အဝတ်အစားအဟောင်းတွေကို အလန်းစားဒီဇိုင်း ဖန်တီးကြည့်ရအောင်
Next articleကြံကြံဖန်ဖန် ရင်ဘက်မွှေး ဒီဇိုင်းဆင်ကြသူများ
သိပျပွီးပွဿနာမရှိလှပမေယျ့လညျး မိဘတှေ အမွဲတမျး တှေးပူတတျတဲ့ ကိစ်စမြား
ကမ်ဘာပျေါက မိဘတိုငျးမှာ တူညီတဲ့အရာတဈခုကို ပွောပါဆိုရငျ သူတို့ရဲ့သားသမီးအရေးနဲ့ပတျသကျလို့ ဘကျပေါငျးစုံကနလေိုကျတှေးပွီး စိတျပူတတျခွငျးပါပဲ။ ကလေးတှဟော တဖွညျးဖွညျးကွီးထှားလာတာဖွဈလို့ ထိနျးကြောငျးရတဲ့ပုံစံတှကေလညျး ပွောငျးလဲနရေတာကွောငျ့ သားသမီးကိုပွုစုပြိုးထောငျရတာဟာ လှယျတဲ့ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုကိစ်စဟာ သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျဘဲ မိဘတိုငျးကွုံတှနေ့ရေတာပါ။ ဒါကွောငျ့ စိုးရိမျပူပနျမှုတှပေပြောကျပွီး စိတျလကျပေါ့ပါးစှာ ကလေးတှကေိုထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျနိုငျဖို့အတှကျ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို...
သငျ့ကလေးကို စဥျးစားတှေးချေါတတျအောငျ ဘယျလိုသှနျသငျမလဲ
ကလေးငယျရဲ့ဦးနှောကျစှမျးအား ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစဖေို့အတှကျ အကူအညီဖွဈစမေယျ့ နစေ့ဉျအလအေ့ကငျြ့မြား
Health & Beauty856